Erdogaan oo shaaca ka qaaday sir culus uu ka hayay Dowladda Mareykanka iyo Kooxda Daacishâ€¦...............
Posted by salaad on December 30 2016
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay hayaan â€œcaddaynta la xaqiijiyayâ€ in isbahaysiga-Maraykanka uu hogaaminayo ay taageerayaan Daacish iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee Suuriya.
â€œCiidamada isbahaysiga waxa ay sheegayeen bilowgii hore:â€ inay la dagaalami doonaan ururka argagixisada ah ee Daacish ilaa iyo dhamaadka.â€ Dhab ahaantii, waxay nagu eedeeynayeen in aan taageerno Daesh.
Hadda way cadahay. waxay taageero siiyaan kooxaha argagixisada oo ay ku jiraan Daesh, YPG (Kurdish Peopleâ€™s Protection Units), PYD (Democratic Union Party). Waa mid aad u cad.
Waxaan hayna caddaymo la xaqiijiyay, la sawiray, sawiro iyo fiidiyow, â€œayuu yiri Erdogan inta lagu guda jiray shir jaraaâ€™id Talaadadii. Maraykanka iyo qaar ka mid dalalka saaxiibada, gaar ahaan Saudi Arabia, Qatar iyo Turkey, ayaa dhowr jeer oo kala duwan lagu eedeeyay Hubaynta iyo maalgelinta kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalamaya Syria ku dhawaad Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹lix sano.
Hadalka madaxweyne Erdogan ayaa imaanaya hal maalin oo kaliya ka dib markii musharaxii hore ee madaxweynaha xisbiga Green ee doorashadii dhawaan soo dhamaatay ee Maraykanka Jill Stein ku eedeeysay Washington inay taageerto kooxaha argagixisada ah marka ay u adeegsanayaan danahooda.